Ceelbuur Nin Qabrigiisa La Diyaariyey Oo Noolaaday! | Xaqiiqonews
Ceelbuur Nin Qabrigiisa La Diyaariyey Oo Noolaaday!
Fagaare kuyaal magaalada Ceelbuur ee gobolka Galguduud bartamaha dalka Soomaaliya waxaa maanta isugusoo baxay boqolaal qof si ay udaawadaan xukun dil oo lagu fulin lahaa ruux lagu eedeeyey in uu yahay gacan ku dhiigle.
Goobta loo doonaayey in dilka lagu fuliyo ayaa waxaa soo buuxdhaafiyey dad isku soo aruuray si ay u daawadaan qaabka dilka u dhacaya.
Saacadihii ugu dambeeyey xilli eedeysanaha uu sugaayo in rasaasta dili laheyd ay ka soo baxdo qoriga, ayaa mid ka mid ah dadkii lahaa dhiigga qofkii uu horay udilay eedeysanaha uu codsaday diyo(lacag magdhaw ah oo laga bixiyo qofka la dilay), lana joojiyo dilka, sidaasna waxaa lagu joojiyay xukunkii dilka ahaa.
Dadkii goobta ku sugnaa ayaa arrintaan aad ula yaabay waxaana fagaaraha laga kaxeeyay ninkii eedeysanaha ahaa ee sida dirqiga ah uga badbaaday xukunka dilka ah.
Arrintan ayaa si aad ah looga hadal hayaa gobolka Galguduud waxaana lafilayaa in qoyska leh dhiigga ruuxa horay loo dilay ay qaataan diyo sidaasna uu ku badbaaday eedeysanaha maanta la dili lahaa.